IPhone 13 iyo wax kasta oo Apple ku soo bandhigtay Keynote | Wararka Gadget
Shirkadda Cupertino waxay u aragtay inay ku habboon tahay inay u dabaaldegto #Taariikhda sanadlaha ah taas oo ay ina tusayso calankeeda marka la eego taleefanka gacanta, iPhone. Munaasabaddan, baaxadda iPhone 13 waxaa lagu soo bandhigay astaamo badan oo cusub, laakiin kaligeed ma timaado, dabcan.
Marka lagu daro iPhone 13, Apple waxay soo bandhigtay taxanaha Apple Watch 7 iyo jiilka saddexaad AirPods, bal aan eegno dhammaan alaabadooda. Aan si qoto dheer u ogaano aaladaha ay Apple damacsan tahay inay ku maamusho suuqa inta lagu jiro sannadkan 2021 iyo inta badan sanadka 2022, alaabtan ma noqon doonaan kuwo hal abuur leh oo ku filan?
1 iPhone 13 iyo dhammaan noocyada kala duwan
2 Apple Watch Series 7, kacaankii ugu weynaa
3 IPad Mini -ka cusub iyo cusboonaysiinta iPad -ka 10.2
iPhone 13 iyo dhammaan noocyada kala duwan
Aynu marka hore ku bilowno iPhone 13 iyo dhammaan astaamahaas midba midka kale la wadaagi doono. Midka koowaad waa processor -ka caanka ah ee A15 Bionic, processor -kaan u heellan ee ay soo saartay TSMC Waxay ujeeddadeedu tahay inay noqoto tan ugu awoodda badan suuqa iyada oo ay ugu mahadcelinayaan tikniyoolajiyadda isku -dhafan ee GPU iyo awoodda cayriin. Dhinaceeda, aaladaha oo dhan waxay yeelan doonaan kuwa cusub Face ID 2.0 iyo darajadiisu waxay hoos u dhacday ilaa 20% ka yar si ay si fiican uga faaiidaystaan ​​oo u siiyaan amni weyn marka la furayo wejiga, dhinac ay aad u dalbadeen dadka isticmaala, iyadoo af -hayeenku uu ku dhex milmay geeska kore ee shaashadda.
Dhanka kale, hadda dhammaan iPhones -ku waxay lahaan doonaan isla 18W oo lacag ah iyada oo loo marayo fiilada iyo 15W iyada oo loo marayo MagSafe, iyo sidoo kale is -dhexgalka dib -u -qaabaynta alaabta - MagSafe, isagoo marna la jaan qaadaya qaybtii hore ee xeedho bilaa -waayir ah oo ay Apple ka dhigtay mid moodada leh. Sidoo kale, ku saabsan isgaarsiinta wireless Apple waxay go'aansatay inay sharad ku gasho shabakadda WiFi 6E, horumar yar oo ka mid ah shabakadda caanka ah ee WiFi 6, oo hagaajineysa xasilloonida iyo gudbinta xogta, sidaas darteed isu meelayneysa sidii aalad hormuud u ah farsamadan.
Sababo cad, Apple wuxuu sharad ku sameeyaa guddiyada OLED Dhammaan aaladdaheeda, marka laga hadlayo iPhone 13 Mini waxay noqon doontaa 5,4 inji, kaas oo u kici doona 6,1 inji oo loogu talagalay iPhone 13 iyo iPhone 13 Pro wuxuuna kor u kici doonaa 6,7 inji ee daabacaadda Pro Max ee iPhone 13. Sida astaamaha muuqda, IPhone -ka noocyadiisa Pro wuxuu lahaan doonaa 120 Hz cabbir cabbir ah, mid kale oo ka mid ah sifooyinka ay aadka u dalbadeen dadka isticmaala sannadihii la soo dhaafay.
Sida for awoodaha kaydinta adeegsiga 128 GB sida caadiga ah ayaa imaanaysa hubaal.
Isla sidaas bay ku dhacdaa baytariyada, sharadka Apple Awoodda ugu badan ee mAh ee aad hore u isticmaali jirtay, haa, ma bixin doonto xeedho lagu daray sanduuqa iPhone.
Ugu badnaan waxaan leenahay isbeddelo ku jira kamaradda weyn oo ah Xagasha Wide waxay leedahay 12 MP oo leh f / 1.6 aperture f / XNUMX iyo nidaam xasilinta muuqaalka muuqaalka sare (OIS). Dareenka labaad waa a 12 MP Ultra Wide Angle oo kiiskan awood u leh qabashada 20% iftiin dheeraad ah marka loo eego nooca hore ee kamaradda iyo inay leedahay dalool f / 2.4. Waxaas oo dhami waxay noo oggolaan doonaan inaan ku duubno 4K Dolby Vision, HD buuxa illaa 240 FPS oo xitaa aan ka faa'iideysanno habka '' shineemada '' oo ku dara saameyn blur iyada oo la adeegsanayo softiweer, laakiin kaliya waxay diiwaangelisaa ilaa 30 FPS.
iPhone 13 / Mini: Astaamaha ugu weyn + Xagasha Wide Ballaadhan
iPhone 13 Pro / Max: Sensor Weyn + Xaglo Wide Ballaadhan + Telephoto Saddex-weyneyn + LiDAR
Iyada oo qiimayaasha u dhexeeya 709 iyo 1699 euro Iyada oo ku xiran aaladda la doortay, waxaa la keydin karaa Sebtember 16, iyadoo dhalmada ugu horreysa ay billaaban doonto Sebtember 24.
Apple Watch Series 7, kacaankii ugu weynaa
Apple Watch wuxuu had iyo jeer lahaa naqshad la garan karo oo wax yar laga beddelay sanadihii la soo dhaafay, iyadoo la abuurayo halbeeg astaan ​​iyo is -beddello taxane ah oo isu meeleeyay astaanta astaanta. Si kastaba ha noqotee, Apple waxay go'aansatay inaysan cusbooneysiinin naqshadda taleefanka Apple Watch Series 7 si ay kuu siiso dareenka sii wadista iPhone-kaaga, iPad-ka, iyo MacBookga aad loo dalbaday. Tani waa sida Apple uga tagtay qaloocyada Apple Watch si xoog leh si ay u siiso naqshad ficil ahaan la mid ah tan Apple Watch Series 6, inta badan kiiska, maadaama shaashadda ay hadda gaartay heer aad u sarreeya oo laga arki karo dhinacyada, wax isticmaaleyaashaas oo ay dalbadeen waqti hore ka hor.
Tilmaamo cusub oo yar oo heer farsamo ah oo ka baxsan processor -ka cusub iyo kartida wax -qabadka, astaamaha lagama -maarmaanka u ah taxanaha Apple Watch 6, sida electrocardiogram -ka iyo altimeter -ka. Wax badan ayaa laga sameeyay dareeraha heerkulka jirka oo aan weligiis wanaag u imaan. Noocyadiisa cusub iyo midabada kala duwan ee midabada kama timaaddo gacanta cusboonaysiinta ee cabbirrada, in kasta oo geesaha la dhimay 40%, in kasta oo aan yeelan doonno noocyo bir, titanium iyo aluminium ah. Qiimuhu wuxuu ka bilaaban doonaa 429 euro oo ah nooca ugu qalafsan ee aaladda oo waxaan sii wadaynaa inaan helno noocyo leh LTE ama waxay ku koobnaan doontaa isku xirka Bluetooth + WiFi iyadoo ku xiran baahida isticmaale kasta. Dhanka kale, Apple ma bixin taariikhaha saxda ah ee la bilaabay, waxay ka tagi doonaan dayrta.
IPad Mini -ka cusub iyo cusboonaysiinta iPad -ka 10.2
Marka hore waxaa timaadda iPad Mini cusub oo dhaxlaya shaqooyinka iPad Air, shaashad gees ilaa gees leh oo leh cidhifyo dhuuban iyo geedo wareegsan, 8,3 inji oo aan lahayn ID ID isku dhafan, oo leh ID Touch badhanka awoodda. IPad -kan cusub ee cusub waxaan ku leenahay A15 Bionic cusub, processor kaas oo jidka ku sii fidi doona iPhone 13 iyo 13 Pro, iyo sidoo kale isku xirnaanta 5G ayaa si toos ah ugu jirta fiilada USB-C si loogu xiro aaladaha.
Marka loo eego iPad -ka 10.2, waxay ilaalinaysaa qiimaheeda mana samayso wax hal -abuur ah heerka naqshadeynta, laakiin waxay lahaan doontaa kamarad cusub oo ah 12MP FaceTime oo leh 122º Wide Angle sensor iyo Apple's A13 Bionic processor.
Kuwani waa dhammaan wararka ay shirkadda Cupertino soo bandhigtay intii ay socotay munaasabaddeeda maanta, ugu dhakhsaha badan ayaa laga heli karaa meelaha ugu waaweyn ee iibinta iyo sidoo kale dukaanka Apple ee jirka iyo internetka, inkastoo aad samayn karto boos celisyada caadiga ah. Waxaa la wada og yahay in Apple sida caadiga ah ay siiso "wax yar" kaydinta aaladahaas taariikhda la bilaabay, waxaan rajeyneynaa inaanan arkin safafka caadiga ah ee Dukaanka Apple sidii waagii COVID-ka hor.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » IPhone 13 iyo wax kasta oo Apple ku soo bandhigtay Keynote